Somaliland: Ciidamada Booliska Somaliland Oo Xabsiga Ku Gurey Qaar kamid Ah Darawaliinta Gaadiidka Basaska Ee U Baxa Xaafadaha Hargeysa+Sababta - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Ciidamada Booliska Somaliland Oo Xabsiga Ku Gurey Qaar kamid Ah Darawaliinta...
Warar aan helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Booliska Somaliland ay xalay xabsiga u taxaabeen qaar kamid ah darawaliinta gadiidka Basaska ee u kala goosha xaafadaha magaalada Hargeysa.
Waxaana darawaliinta la xidhay xadhigooda sababay sida naloo sheegay kadib markii ay kordhiyeen qiimihii lagu fuulayey baska kaas oo ay ka dhigeen qofkiiba 2000 (Laba Kun) oo Shilling Somaliland ah halka uu markii hore ahaa 1500 (Kun Iyo Shan Boqol) oo Shilling Somaliland ah.
Waxaana intaasi ka dib lacagtaasi lagu kordhiyey diiday dadkii daganaa xaafadaha ay basaskani u baxayeen,waxaana darawaliintu iyaguna ay diideen in ay baxaan hadii aanay bixinayn Rakaabku lacagtaasi Laba Kun ah.
Intaasi kadib ayaa waxa goobta ka dhashay Buuq iyo Sawaxan,waxaana markiiba yimi ciidamada Booliska Somaliland kuwaas oo xabsiga ku gurey qaar kamid ah darawaliintii diiday inay qaadaan dadka kuna qasbayaye inay bixiyaan lacagtaasi.
Waxaana ay darawaliintani lacagtan ay kordhiyeen ay ku sababeeyeen Sicir Bararka dalka ka taagan iyo qiimaha dhaca lacagta Somaliland,kaas oo wakhti xaadirkan 1$ (Halka Dollar) lagu sarrifayo 8500-9000 (Sideed Kun Iyo Shan Boqol Ilaa Sagaal Kun) Oo Shilling Somaliland ah.Sidoo kalena waxay sheegeen darawaliintani in lagu kordhiyey qiimaha Shiidaalka.
Ilaa hadda lama garanayo halka ay sal dhigan doonto xaaladdan dalka ka taagan iyo sicir bararkan aafeeyey Bulshada reer Somaliland,iyada oo xukuumadduna ku fashilantaay inay fuliso go’aamo ay hore uga soo s aartay sicir bararka.